Malunga nathi-iKimpok Technology Co, Ltd.
I-COFDM HD Ukuhambisa ividiyo
Ukudluliselwa kweVidiyo ye COFDM
I-COFDM yokuhambisa ngaphandle kwe-Wireless
Isitshisi esingenantambo ye-HD
Umnxibelelanisi weVidiyo engenantambo
I-Kimpok Technology ikhokela ishishini lobugcisa obuphezulu behlabathi ekuphuhliseni nasekuveliseni. Inkampani eyasekwa ngo-1998 kwaye ibekwe e-Shenzhen China. Ukubonelela ngobonelelo ngenkqubo yokunxibelelana ngaphandle kwamacingo kwi-wireless kusasazo, i-UAV, ukuxhaphaka koluntu kunye nemizi mveliso yezokhuselo. Ngotyalo mali oluqhubekekayo kwindalo kunye nokudibanisa iimveliso kunye neenkonzo ezizodwa, i-Kimpok inikezela ngezisombululo eziphezulu ezivumela abathengi bethu ukuba benze imisebenzi yabo ngakumbi.
I-Kimpok Technology ineqela elinamandla lobuchwephesha kunye ne-R&D. Sizinikezele ekuphuhliseni inkqubo yokujonga ividiyo engenazingcingo yefowuni ephezulu yokusebenzisa ukusetyenziswa komthetho kunye nomkhosi, imikhosi yentsimi, radar, i-R / C helikopta, ukhuseleko nokhuselo, amasebe karhulumente, ezomkhosi, ezokhuseleko, indawo yeoyile, inqanawa enkulu, imigodi enkulu, kwimizi-mveliso njalo njalo.
Iphele iminyaka eli-15, ubuchwephesha beKimpok buhlala bugxila kuphando nasekuyileni kumzi-mveliso weesantya esiphezulu sokuhambisa ividiyo esuselwe kwindawo ye-LOS / NLOS, especial yeZithuthi zeenqwelomoya (i-UAV), indawo enomoya kunye neendawo zomkhosi. Ukumodareyitha kwe-COFDM kunye ne-TDDworking mode transmitter / isamkeli zizibonelelo zethu ezibonakalayo. Yonke imveliso yeemveliso kufuneka ibe kulawulo lomgangatho olungqingqwa ngokusebenzisa i-US (HP) ehlalutyo yomhlalutyi kunye neJamani (Rohde & Schwarz) Uhlalutyo lwenethiwekhi.
Umdlulisi kunye nomamkeli ngeAnm-jamming, umfanekiso ekumgangatho ophezulu, umgama wokuhambisa ubude, kwaye une-appraise kakhulu kule ndawo. Inkqubo yokuphuhliswa kwenkampani kunye nexesha elide yeyona ndlela isikhokelela ekubeni yinkokeli kule ndawo, sihlala sikholelwa ukuba singayenza. Siza kugxila rhoqo kuphando nasekuyileni kumzi othumela ngcingo ngaphandle kwamacwecwe.
Wamkelekile ukuba uthethe iimfuno zakho, siya kuzama ukufikelela iimfuno zakho kwaye senzele isixhobo esikhethekileyo. ” Inkxaso kunye neengcebiso zakho zizizathu ezisishukumisayo ”. Injongo yethu kukubonelela abasebenzisi bethu ngenkqubo ye-videography engenazingcingo yehlabathi jikelele.
I-Kimpok yasekwa ngo-1998. Iingcali ekuphuhliseni iimveliso, ukudityaniswa kwenkqubo kunye nenkonzo yezobuchwephesha yezixhobo zothumelo olungenacingo lwefowuni kunye nendawo yemithombo yeendaba eendaba ezininzi. I-OEM okanye i-ODM njengoko iceliwe.
"Qhubeka nokuhamba ngobulumko bethu ngekamva eliqaqambileyo" Sithatha oku njengesikhokelo kwisenzo kwiminyaka edlulileyo kwaye siyakuqhubeka sikhula. Ngoku kukho iimveliso ezintathu ezilandelwayo ezazenziwe zaza zangatyalwa: i-Coded Orthogonal frequency split multiplexing (cofdm), isixhobo sokuhambisa ividiyo singenacingo, isixhobo sokuhambisa ividiyo singenazingcingo
Ukuvelisa iimveliso zokhuseleko eziphezulu-ngaphezulu kweminyaka eli-10 kwiShishini lezoKhuseleko
I-Kimpok yinkokeli eyaziwayo kwilizwe lonke kwizisombululo zokujonga iaudio kunye nevidiyo. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, sizakhele igama kwisakhono sethu sokukwazi ukulungisa izisombululo zethu ukujongana neemfuno ezizodwa zabathengi bethu.
Ukufezekisa umgca wethu obanzi weemveliso ezikumgangatho ophezulu, i-Kimpok ibonelela ngemizi mveliso ekhokelela kwiwaranti, kunye nenkxaso yobomi beemveliso zethu.
* Ifumaneka ngesicelo
* Izakhono kunye nokwenza ngokwezifiso
Uluhlu olubanzi lweKimpok lokukhulisa amandla emveliso kunye notyalo mali olunobundlongondlongo kwinkxaso yezobugcisa ziyaqhubeka ukwahlula inkampani yethu kukhuphiswano.
* Ukuqokelela kwakha
* Umdibaniso wesiko
* Ukuhlawula ngokuthe ngqo
* Izisombululo ze-OEM
* Ithuba labucala labucala
* Inkxaso eqinileyo (1: 1 iteknoloji yokuthengisa)
* Izisombululo ezingenazingcingo
* Izisombululo zevidiyo yesiko
* Izisombululo zevidiyo ye-IP
* Izisombululo ezincinci
* Qokelela izisombululo
* Izisombululo kunyanzeliso lomthetho
* Izisombululo zeselula
* Izisombululo ezihlanganisiweyo
* Izisombululo ezenziwe ngokwezifiso
John usenobudlelwane bexesha elide kwishishini
Sikholelwa ukuba impumelelo yethu ivela kwimpumelelo yabathengi bethu, uphuhliso lwethu alunakohlukanisa nentsebenziswano yabathengi kunye nenkxaso. Siyathemba ukuba ungasjoyina, siya kukuzisela amaxabiso kunye neenzuzo, kunye nokwenza ikamva eliqaqambileyo kunye.
Idilesi:I-Rm1310, Indawo yokuhlala yase-Shangyou, kwi-Gongye Rd., Kwisithili sase-Longhua, eShenzhen, kwi-518000 China
Inombolo kanomyayi:+ 86-755-26786281